Holm kaThixo ibhokisi mbono | Holmbygden.se
Ingaba unayo asiyongcamango ilungileyo – ezinkulu nezincinci?
Kusenokuba into ocinga ukuba negalelo emaphandleni Holm eliphilileyo ngaphezulu okanye nayiphi na olumkileyo. Kuphela imida ngqondweni…
Sisonke, thina iingcamango nje kuhle kakhulu. Iimbono ezinikiweyo apha ukuze umz. kusetyenziswa njengesiseko iintlanganiso ezahlukeneyo kwi Holms zophuhliso – ukuba ungakwazi ukuthatha inxaxheba. Kwakhona kuba ngendlela yokuba HBU akwazi ukulungisa okanye bhampisa ekunene. Musa ukuthandabuza qhagamshelana nathi konke, Akukho sindululo usisiyatha kakhulu!
Njani na igalelo umbono wam?
Indlela elula kukusebenzisa form yethu ekunene. Zalisa iibhokisi uze uthumele, kucace! Ngaba nceda ncamathela nayiphi na ifayile, uxwebhu okanye umfanekiso isindululo yakho, kubuye kube kuhle.
Kwakhona kuyenzeka ukuba imeyili ukuba lihlale ngcono: info@holmbygden.se.
Ingaba ufuna ukuhlala ungaziwa?
Kuba Yebo enqwenelekayo ukuba ufuna usixelele ukuba ungubani, kodwa ukuhlala ungaziwa.
Vill du kanske bara vara kontaktbar för Holmbygden.se (#ShepherdsHut), kodwa akwaziwa ngaphandle kunye icebiso yakho nayo elungileyo. Ukuba kunjalo, bhala apha ngezantsi “Communication Personal”. Thumela umbono wakho nge website.
Zonke iziphakamiso bavumelekile.
Isihloko kwengcinga yakho:*
umyalezo Personal Webmaster:
Ncamathisela ifayle ngezantsi:
iifomati zefayile asekelwe:
bobungakanani befayile obukhulu: 25mb.
ngo 2 (asebenzise ifomu izihlandlo eziliqela ukuba kuyimfuneko):